gabdhaha dibka dhiibto cuduradaan ha iska baaraan waaa hubaal - iftineducation.com
gabdhaha dibka dhiibto cuduradaan ha iska baaraan waaa hubaal
iftineducation.com – Raaxa sariireed degdegta oo socota waqti gaaban isla markaana dhamaata wax nah ah ay leedahay ma leh labada qof ee raaxadaas wada qaadanayana ma helayaan qanac dhamays tiran haddaba hadaad si fiican u akhrisid qodoban isla markaana aad si wanaagsan u fulisid waxaa hubaala ah in aad gaaraysid raaxo dhamaystiran isla markaana ay noloshiina ka lamaane ahaan ay wax weyn iska badalayaan gurigana ay ku soo kordhayaan farxad iyo nashaad dheeraad ah.
1.Nasataa maalinta ka horaysa adigoo seexanaya hurdo aan lagaa dhex galin kuna seexanaya shayga ugu raaxada badan ee aad heli kartid isla markaana seexanaya meel shanqar iyo buuq ka dheer darajada kulaylkeeduna uu yahay mid aad u dhexdhexaad ah.
2.Qaado cunto wanaagsan oo u badan mid nafaqo leh adigoo iska ilaalinaya in aad dareentid gaajo isla markaana cab sharaab uu ku badanyahy vitamin-C isla markaasna jirkaaga ka uumi baxa.
3.Galabtii markii la gaaro guda gal hagaajinta iyo nadiifinta jirkaag adiga oo ka bilaabaya ilkahaaga kuna xiginaya jirka intiisa kale ku qabayso biyo aab kulalayn sidoo kale isticmaal waxyaalaha jirka lagu nadiifiyo sida saabuun shaamboo iwm ha ilaawin in aad cuntid waxyaalo cunto fudud ah oo u badan qudaar iyo hal koob oo qaxweah.
Maqribka marka la gaaro qaado casho wanaagsan -hadaad ninka tahay guriga agagaarkiisa iska layrso, -hadaad gabadha tahay markaas waxaa kuu yaala shaqo aad u fara badan gaaban qaado ka dibna sariirtaad ama qolkaaga iska sii tag adiga oo udug aad us sareeya isticmaalaya isla markaana ku mashquulaya kala bixinta jirkaaga iyo timahaaga.
Ishaha marka la gaaro u diyaar garooba labadiinuba raaxada ayadoo ay mid waliba kan kale ku caawinyo in jawigu uu noqdo mid laga damacsanyahay in laga gaaro raaxo dhamays tiran,
Ciyaarta markaad bilowdid ha ku dagdagin in aad isla markiiba labada geed afka isku galisaan ee ka hor mariya baashaal iyo sheeko wadnaha taabanaysa mudo qiyaas ahaan 60 daqiiqo ah.
Masjid haweeney Imaam ka tahay oo laga furay Denmark iyo Los Angeles: Video
Arimahaan Xaaskaaga Xasilooni ayeey ka heshaa joogteey